घोराहीमा बृहत् खानेपानी योजना ५४ करोड लागत, ४० वर्षसम्ममा खानेपानी अभाव नहुने - Ganatantra Online
घोराहीमा बृहत् खानेपानी योजना ५४ करोड लागत, ४० वर्षसम्ममा खानेपानी अभाव नहुने
गणतन्त्र अनलाइन १६ पुष २०७७, बिहिवार
घोराही, १६ पुस । घोराहीमा बृहत् खानेपानी परियोजना शुरु गरिएको छ ।
घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले सरकारसँगको सह लगानीमा बृहत् खानेपानी परियोजना शुरु गरेको हो ।
परियोजनाका लागि केही समय भित्र टेण्डर प्रक्रिया शुरु हुने संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लागि ५४ करोड रुपैयाँ लगात अनुमान गरिएको छ । परियोजनाको काम शुरु भएको दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने संस्थाको लक्ष्य छ ।
सहलगानी अन्तर्गत ७० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । बाँकी ३० प्रतिशत खानेपानी संस्था आँफैले खर्च व्यहोर्ने सहमति भएको छ । संस्थाले आफ्नो भागमा पर्ने ३० प्रतिशत मध्ये पनि २५ प्रतिशत नगर विकास कोषबाट ऋण लिने छ । ५ प्रतिशत रकम भने संस्थाले आफ्नै खाताबाट खर्च गर्ने छ ।
भविष्यमा घोराही क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या नहोस् भनेर परियोजना शुरु गरिएको संस्थाका उपाध्यक्ष भरतमणी पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । परियोजना अन्तर्गत कटुवा खोलामा एउटा सतही कुवा र बबईमा दुई दुई ओटा सतही कुवा तथा बोरिङ खनिने छ । एक सेकेण्डमा एक सय लिटर पानी आउने गरी काम हुन थालेको संस्थाका सचिव सुमन शर्मा जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ७ मा परियोजनाको परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणको उद्घाटन नरिवल फोडेर गरिएको थियो । कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष धुव्र केसी, सदस्यहरु धमेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मी सिंह ठकुरी, खुमा खड्का थापा, संस्थाका इञ्जिनियर प्रकाश विक्रम डाँगी, प्राविधिक प्रकाश श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन, संस्थाका सल्लाहकारहरु वमबहादु डिसी, लुमाकान्त न्यौपाने सागर, पार्टी प्रतिनिधिहरु भुपबहादुर डाँगी, विवेक श्रेष्ठ, ७ नं वडा अध्यक्ष खोपिराम चौधरी, खानेपानी डिभिजन कार्यालयका डिइ गुननिधी पोख्रेल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
अब घोराहीबावसीले खानेपानीको चिन्ता गर्नुपर्दैन
घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था
तपाईहरुले शुरु गर्न थाल्नुभएको परियोजना कस्तो हो ?
हामीले निके दूरगामी सोँचका साथ सरकारसँगको सहलगानीमा यो परियोजना शुरु गरेका छौं । घोराही क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा नै खानेपानीको समस्या नहोस् भनेर परियोजना शुरु गरिएको हो । पश्चिम नेपालमै हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै आएका छौं ।
यो परियोजना सम्पन्न भएपछि घोराहीवासीलाई के फाइदा हुन्छ ?
पछिल्लो समय हाम्रो जिल्ला खण्डहर बनिरहेको छ । पानीका स्रोतहरु सुकिरहेका छन् । हामीले दीर्घकालीन सोँच नराख्ने हो भने भविष्यमा खानेपाीको हाकार हुने देखियो । त्यसैले हामीले बृहत्रुपमा योजना बनाएर भविष्यमा पनि खानेपानीको संकट नहोस् भनेर काम शुरु गरेका छौं । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि घोराही क्षेत्रमा आगामी ४० वर्ष पनि खानेपानीको अभाव हुँदैन ।
यसको परिणाम कहिले आउँछ ?
हामी अहिले टेण्डर प्रक्रियामा छौं । टेण्डर प्रक्रिया शुरु भएको दुई वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्ने छ । हामीले अहिले हाम्रा उपभोक्तालाई साँझ र बिहानको समयमा पानी उपलब्ध गराईरहेका छौं । अबको दुई वर्ष भित्र घोराहीवासीको धारामा २४ सैं घण्टा खानेपानी आउने छ ।
उपभोक्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म सबैभन्दा पहिले आम उपभोक्ताहरुलाई लामो समयसम्म मलाई विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुकै साथ र हौसलामा मैले काम गरिरहेको छु । म घोराहीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु । खानेपानी विनाको मानव जीवनको कल्पना गर्न पनि सकिदैन । म आम उपभोक्ताहरुको अपेक्षालाई हरदम पूरा गर्न तयार छु । म संस्थामा रहेर कहिले पनि आफ्नो वारेमा सोचेको छैन । मेरो योजना सधै उपभोक्ताहरुकै पक्षमा हुन्छ । मलाई सफल बनाउनका लागि हाम्रा कार्यसमितिका साथीहरु, सल्लाहकारज्यूहरु, दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, नागरिक समाज, पत्रकार साथी तथा आम उपभोक्ताको साथ रहेको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ दिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।